ပူပြင်းတဲ့ Runner အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများမှို China Manufacturers & Suppliers & Factory
ပူပြင်းတဲ့ Runner အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများမှို - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 16 များအတွက်စုစုပေါင်း ပူပြင်းတဲ့ Runner အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများမှို ထုတ်ကုန်များ)
ပူပြင်းတဲ့စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်း၏ပြေးသမားမှိုထဲမှာအရည်ပျော်အောင်ပူ Runner မှိုဦး se အပူ device ကိုအမြဲသံသရာဖွဲ့စည်းရိုးရာသေဆုံးသည်ထက်တိုတောင်း solidified မှိုမဟုတျဘဲဖြစ်ပါသည်, ပိုပြီးထဲမှာအအေးမရပြေးသမားတို့အတွက်စင်ကြယ်သော, အကိုတိုစေပုံသဏ္ဍာန်သံသရာနေမှုကိုချေဖျက်, ကုန်ကြမ်းကယ်တင် ပူပြင်းတဲ့စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်း၏မှို,...
CNC (Computer ကိုကိန်းဂဏန်းထိန်းချုပ်ရေး) အရေးပါသောအဆင့်မြင့်ပလပ်စတစ်တန်ဆာအပြောင်းအလဲနဲ့မှိုအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်။ CNC Mills စက်မြင့်မားသောစက်တိများနှင့်တည်ငြိမ်ရေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအပြောင်းအလဲနဲ့အရည်အသွေးကိုရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် NC စက်ကိုလည်းအော်ပရေတာရဲ့အမှားရှောင်။...
အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု Injection ကိုမှိုစက်
OEM မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းကုန်ပစ္စည်းစသည်တို့ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်မှို, အိမ်သူအိမ်သားမှို, မော်တော်ကားနှင့်ဆေးဝါးပစ္စည်းကိရိယာများမှို, လျှပ်စစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းမှိုရှိသည် ကျနော်တို့ဒါပေါ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြုနဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့်အမျိုးမျိုးသောမှို၏ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ကွယ်လွန်, ထိုကဲ့သို့သောပလပ်စတစ်ဆေးထိုးမှိုအဖြစ်, ချ....
အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ၏မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု, ကြီးမားတဲ့အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ၏မှိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်အကြီးစားမှိုထုတ်လုပ်မှုများအတွက်မှို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြင့်မားလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။ ဒါဟာ R & D ပုဂ္ဂိုလ်များ၏သိပ္ပံနည်းကျဒီဇိုင်းနှင့်အဆင့်မြင့်မှိုကုန်ထုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများဒီဇိုင်းရန်လိုအပ်ပေသည်။...
အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ၏မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု, အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများကိုမှို, အကြီးစားမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများများအတွက်မှို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးပိုတောင်းဆိုမှုများဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာမှိုကုန်ထုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများဒါပေမယ့်လည်း R & D...
အကြီးစားမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု, မော်တော်ကားမှို၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့မော်တော်ကား shell ကို, ဘီးအချက်အချာ, ဘန်ပါနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်ဖုံးအုပ်မှိုဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့မှိုများထုတ်လုပ်ကိုလည်းမွမ်းမံရန်လိုအပ်ပါသည်နှင့်ထုတ်လုပ်ထုတ်ကုန်နောက်ပိုင်းပရိသ၏တိကျသော size...
ထိုကဲ့သို့သောအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်အစိတ်အပိုင်းများ Moldmaking နှင့်အခြားခက်ခဲပလပ်စတစ်ပစ္စည်းကို manual စက်များတွင်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်အလွန်ကျွမ်းကျင်ကုန်သွယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ CNC ဝါယာကြိုး EDM, CNC သိုးထီး EDM, မျက်နှာပြင်ကြိတ်, လက်ချောနှင့်ပိုပြီး။ ဤအမှုအလုံးစုံဟာအလွန်ထိရောက်မှု output...
မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍဆေးထိုးတန်ဆာနည်းပညာများတိုးတက်စေရန်ဆက်လက်အဖြစ်, စိတျအပိုငျး 0,001 လက်မအတိုင်းတင်းကျပ်စွာသည်းခံစိတ်နှင့်အတူဒီဇိုင်းအတွက် ပို. ပို. ရှုပ်ထွေးဖြစ်လာရသည်။ အဆုံးအသုံးပြုမှုပေါ် မူတည်. ဤပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များအများအပြားကြမ်းတမ်းအောက်-The-ပါးပျဉ်းလည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်မှာဆီးတားရပေမည်။...
အကြီးစားပူပြေးသမားမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုစီးဆင်းမှုရုပ်သံလိုင်း unfrozen ၏အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းအောင်အပူပေးကိရိယာများ အသုံးပြု. မှိုဖြစ်ပါတယ်။ ပူပြင်းပြေးသမား၏အစိတ်အပိုင်းများ၏အရည်အသွေးကောင်းလှ၏, အကျန်နေတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုနိမ့်သည်နှင့်အစိတျအပိုငျးအသေးပုံပျက်သောရှိသည်, နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။...
အကြီးစားဟော့ Runner မှိုလုပ်ခြင်း
အကြီးစားပူပြေးသမားမှိုချမှတ်ခြင်း, အကြီးစားပူပြေးသမားမှိုသာမန်မှို installation ကိုအပူပေးကိရိယာစီးဆင်းမှုကျမ်းပိုဒ်များတွင်အရည်ကျိုကုန်ကြမ်းခဲသည်မဟုတ်သောမှိုဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမအအေးအပြေးသမားစရာရှိသောကြောင့်စင်ကြယ်သောပူသောအပြေးသမားမှိုများတွင်ကကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။...
ပူပြင်းတဲ့အပြေးသမားအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကိုမှို, ပူပြေးသမားစနစ်ကတစ်ခုတည်းခေါင်းကိုပူပြေးသမားစနစ်ကသို့ကွဲပြား, Multi-ခေါင်းကိုပူပြေးသမားစနစ်နှင့်အဆို့ရှင်တံခါးဝပူပြေးသမားစနစ်။ အစိတ်အပိုင်းများ၏ဖွဲ့စည်းကာလပြေးသမားစနစ်၏အအေးအချိန်မကန့်သတ်စရာရှိသောကြောင့်, အစိတျအပိုငျးကုသပြီးနောက်ကာလ၌နှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ပြီးတာရှည်သည်။...
အသေးစားဟော့ Runner မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
ပူပြင်းတဲ့အပြေးသမားမှိုရိုးရာမှိုထက်တိုတောင်းနှင့်ကုန်ကြမ်းကယ်တင်သောဘုံမှို၏စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းအတွက်အရည်ကျိုခဲ့ကုန်ကြမ်းခဲမရသောမှိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမှိုမအအေးအပြေးသမားစရာရှိသောကြောင့်စင်ကြယ်သောပူသောအပြေးသမားမှိုများတွင်ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများ။ ဖောက်သည်များ,...
ပူပြင်းတဲ့အပြေးသမားမှိုဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှု, ပူပြေးသမားစနစ်မှို၏လိုင်ခေါင်းထဲသို့သွန်းသောပလပ်စတစ်ဆေးထိုးအပ်ရာပလပ်စတစ်ဆေးထိုးမှိုများတွင်အသုံးပြုအပူအစိတ်အပိုင်းများ, ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလိုင်ထုတ်လုပ်ခံရဖို့အစိတ်အပိုင်းဆင်တူသောမှို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပူပြင်းပြေးသမားစနစ်၏အားသာချက်နေသောခေါင်းစဉ်:...
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့သတ္တုစိုင်းကွယ်လွန်, ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးမှို, မော်တာ stator & ရဟတ်မှိုနှင့်နေမှုကိုချေဖျက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆေးထိုးအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်အထူးပြုနှင့်အမျိုးမျိုးသောမှို၏ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်သေဆုံးသည်။ ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောမှိုများကို & ဒါပေါ်တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံ,...
ပူပြင်းတဲ့ Runner အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများမှို
ပူပြင်းတဲ့ Runner အကြီးစားအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများမှို
အကြီးစားအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ၏ injection မှို